Sababta loo xiray qaar ka mid ah wadooyinka Muqdisho iyo qorshaha shacabka ku nool – Hornafrik Media Network
Waxaa saakay xiran qaar ka mid ah wadooyinka ugu muhiimsan magaalada caasimadda ah ee Muqdisho, iyada oo la filayo in saacadaha soo socda uu magaalada ka dhaco banaanbax uu soo qaban qaabiyey maamulka gobolka Banaadir.
Ciidamo ka tirsan kuwa Booliska Soomaaliya ayaa xirey wadooyin ay ka mid yihiin, agagaarka taalada Dajirka Daahsoon, wadada ka baxda Suuqa Beerta ee aada dhinaca wadada Maka Al-mukarama, wadada ka baxda Isgoyska Ceelgaabta ee aadan dhinaca Isgoyska Xamar-Jajab iyo wadooyin kale oo muhiim u ah isku socodka gaadiidka, waxaana gabi ahaanba loo doiidayaa in gadiidka noocyadiisa kala duwan uu isticmaalo.
Sababata wadooyinka loo xirey ayaa ah in maanta la qabanayo bannaanbax ballaaran oo ka dhan ah Al-Shabaab, kadib qaraxii maalintii Sabtida ka dhacay Isgoyska Ex Control Afgooye ee Magaalada Muqdisho.
Qaraxaas oo ahaa kii seddaxaad ee dadkii ugu badnaa ay ku dhintaan, isla markaana ka dhaca Muqdisho ayaa argagax-geliyay shacabka Soomaaliyeed iyo dadyowga kale ee dunida.
Maamulka gobolka Banaadir ayaa maalinkii Talaada ee lasoo dhaafay iclaamiyay in dadweynaha reer Muqdisho ay Khamiista manta ah isugu soo baxaan wadooyinka, iyadoo bannaanbaxaasi lagu muujinayo sida ay dadku uga soo horjeedaan Al Shabaab iyo weerarrada ay ka geystaan Muqdisho.
Dadweyne aad u badan oo ka kala yimaada degmooyinka iyo daafaha magaalada Muqdisho ayaa lagu wadaa inay maanta banaanbax ka dhigaan Muqdisho, iyagoo socdaal ku mari doona wadooyinka waaweyn oo qaarkood loo diidayo gaadiidka ila markaana ay ku suganyihiin cutubyo ka tirsan ciidanka booliska Soomaaliya.
Gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna Duqa Muqdisho, Cumar Maxamuud Maxamed Filish oo Arbacadii shalay dhagax dhigay xarunta degmada Warta Nabadda oo ku burburtay weerar ismiidaamin ahaa, oo Shabaabku ku qaadeen 14-kii bishii May ee sanadkii tegay ayaa shacabka Soomaaliyeed ugu baaqay inay Shabaab u aqoonsadaan cadowgooda.
Duqa Muqdisho ayaa tilmaamay in Soomaaliya ay ka gudubtay meeshii ay shalay ku dhacday, isla-markaana uu hubo in dadka Soomaaliyeed ay midnimadooda ilaashan doonaan.
“Shacabka Soomaaliyeed waxaan uga mahadcelinayaa samirkooda, dulqaadkooda, isu duubnidooda iyo sida ay u garteen cadowgooda, meelna ay uga soo wada jeesteen. Waxaan hubaa Somaliya inay ka istaagtay meeshii ay shalay ku dhacday, waxaan hubaa dalkaan haddii uu Alle yiraahdo inuu horumarayo, waxaan hubaa dadka Soomaaliyeed oo ah kuwo waxbartay, oo shalay sidii ay ahaayeen aan maanta ahayn inay midnimadooda adkeysan doonaan.” Ayuu yiri Duqa Muqdisho Cumar Filish.
Dani oo sheegay in Puntland hogaamineyso kacdoonka dowladnimada Somalia